Ahoana no hijirihana ny MSN Spaces amin’ny teny Sinoa mba hahafahana mampiasa ireo teny voarara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Desambra 2019 16:07 GMT
Isaorana i Bennett Haselton avy ao amin'ny Peacefire.org ho an'ireto torolalana manaraka mikasika ny tolotra ho an'ny vahoaka ireto, natao ho an'ireo Sinoa mpampiasa aterineto te hiala an'ireo mpanivana teny ao amin'ny MSN Spaces ao Sina ka tsy mamela azy ireo hanisy ny teny hoe “demaokrasia”, ohatra, anatin'ny lohatenin'ny bilaoginy.
Raha misy te handika ireo torolalana ireo amin'ny teny Sinoa, aza misalasala manao izany, avoahy ao anatin'ny bilaoginao na ny vohikalanao ila dikateny, ary miangavy anao izahay hanome ilay rohy ao amin'ny faritra natokana ho an'ny “fanehoankevitra” amin'ity lahatsoratra ity. Na koa, raha tsy manana bilaogy na vohikala ianao, afaka alefanao mivantana ao amin'ny faritry ny fanehoankevitra ny dikateny manontolo.
VAOVAO FARANY: Efa manana dikateny ny bilaogy The Working Man ao Taiwan.
MARIHO IHANY KOA: Milaza i Doubleaf fa niezaka nampiasa ny MSN Spaces amin'ny teny Sinoa izy ary tsy voasakana intsony ireo teny saro-pady. Misy tratran'izay koa ve ny hafa?
VAOVAO FANAMPINY (9:15 Alina, 16 Jona) – Vao avy niezaka nanokatra bilaogy Spaces Sinoa ny tenako ka nampiasa ireo tarehintsoratra Sinoa ho an'ny “demaokrasia” “zon'olombelona” ary “fahafahana,” ary nahazo hafatra milaza amiko fa tsy afaka mampiasa ireo teny voarara ireo aho.
Ary koa, raha ao Sina ianao ka manandrana an'izao, raha manana olana na fanontaniana ianao, na koa tsy mandeha ilay izy, miangavy anao hampahafantatra anay izany ao amin'ny faritry ny “fanehoankevitra”.
Ahoana ny fomba hametahana ireo teny Sinoa voarara anatin'ny lohateninà bilaogy ao amin'ny MSN Spaces ao Sina
TANDREMO! Na dia afaka mampiasa ireto torolalana ireto hampidirana teny voarara anatin'ny lohatenin'ny bilaoginao amin'ny teny Sinoa aza ianao, mbola voara-maso sy voafehin'ny governemanta ny fidirana Aterineto ao Sina. Raha mampiasa ireto torolalana ireto ianao mba hamoahana fitaovana voarara, tsy tokony hamoaka ny bilaoginao avy aminà “terminal” anà Aterineto izay ahafahana mamantatra ny toerana misy anao avy amin'ireo hetsika ataonao, ary tsy tokony hamoaka na inona na inona ahafahana mamantatra anao ianao ao amin'ny bilaoginao. Tokony hampiasa adiresy HotMail.com ihany koa ianao, izay tsy ahafahana mamantatra anao amin'ny anaranao tena izy (mamoróna kaonty HotMail.com iray vaovao raha ilaina izany).
Mba ahafahanao mampiasa ireo torolalana ireo, mila mamorona kaonty MSN Spaces iray vaovao ianao. Indrisy fa tsy afaka manaisotra ireo sivana napetraka taminà bilaogy efa misy ireo torolalana ireo. Raha efa namorona kaonty MSN Spaces ianao ka nampiasa ny adiresy MSN.com na HotMail.com anao, dia mila mamorona adiresy MSN.com na HotMail.com iray vaovao ihany koa, satria ny adiresy MSN.com na HotMail.com rehetra dia tsy afaka mifandray aminà kaonty MSN Spaces mihoatra ny iray.
Raha te hamorona bilaogy izay ahafahanao mamoaka teny Sinoa voarara anatin'ny lohateny ianao:
RAHA MAMPIASA NY TENY ANGLISY IANAO:
Raha miteny Anglisy ianao, mandehana ao amin'ny http://spaces.msn.com/?mkt=en-us
Mampiasà ny pejy amin'ny teny Anglisy mba hamoronana bilaogy MSN Spaces vaovao.
Avy eo vantany vao voaforona ilay bilaogy, mandehana ao amin'ny rohy http://spaces.msn.com/?mkt=zh-cn mba hamerenana ny pejy ho amin'ny teny Sinoa. Afaka mamoaka ny bilaoginao amin'ny teny Sinoa amin'izay ianao ary afaka mampiasa ireo teny Sinoa voarara anatin'ny lohateny. Raha toa ka *noforonina* tamin'ny alalan'ny pejy Anglisy ny bilaoginao, tsy hihatra ny sivana amin'ny teny.
RAHA TSY MITENY ANGLISY KOSA DIA:
Tsy maintsy manana kaonty HotMail ianao. Mamorona kaonty HotMail vaovao raha mbola tsy manana, ary mandehàna ao amin'ny www.HotMail.com ary midira amin'ny kaonty HotMail anao. Ataovy azo antoka fa tafiditra tsara ianao vao manohy ny dingana manaraka.
Mandehana any amin'ity rohy ity: http://spaces.msn.com/?mkt=en-us
Hipoitra amin'ny teny Anglisy ny pejy.
Tsindrio ny bokotra “Sign Up” eo ampovoan'ny pejy. [Fanamarihana: raha adika amin'ny teny Sinoa ity tahirinkevitra ity, tsy tokony hadika kosa ny teny hoe “Sign Up”, satria io no ahitan'ny mpampiasa ilay bokotra.]
Ao amin'ny pejy hampidiranao ny fandrafetana ny bilaoginao vaovao:
Eo amin'ny faritra misy marika hoe “1.”, mampidira lohateny. Afaka mampiditra teny voarara anatin'ny lohateny ianao eto, na afaka manova izany amin'ny manaraka.
Anatin'ny faritra misy marika hoe “2.”, mampidira rohy izay tianao.
Ajanony amin'izao ny “3.”.
Anatin'ny faritra “4.”, mariho ilay “case à cocher” (izay midika fa manaiky ny fifanarahana amin'ny fampiasàna nyMSN ianao).
Anatin'ny faritra ambany, tsindrio ny bokotra eo ankavia misoratra hoe “Create your space” [fanamarihana, raha adika amin'ny teny Sinao ity tahirinkevitra ity, aza adika ireo teny hoe “Create your space”] mba hamoronanana ny kaonty MSN Spaces anao.
Ny pejy manaraka izay dia hiteny (amin'ny teny Anglisy) fa voaforona ny kaonty MSN Spaces anao. Anatin'ny faritra ambany tsindrio ny bokotra eo amin'ny ilany havanana misoratra hoe “Go to Your Space” [fanamarihana, raha adika amin'ny teny Sinao ity tahirinkevitra ity, aza adika ireo teny hoe “Go to Your Space”] mba hankanesanao ao amin'ilay pejy handrafetana ny kaonty MSN Spaces anao.
Vantany vao mahita ilay pejy handrafetana ny kaonty MSN Space ianao(amin'ny teny Anglisy), ampio ireo tarehintsoratra “&mkt=zh-cn” amin'ny faran'ilay rohy eo amin'ny fitety.
Hamadika ny pejy amin'ny teny Sinoa izany. Saingy, koa satria *noforoninao* tamin'ny alalan'ilay pejy tamin'ny teny Anglisy ny bilaogy, mbola tsy hihatra amin'ny lohatenin'ny bilaoginao ilay sivana mahazo ny teny Sinoa.
Afaka manova ny lohatenin'ny bilaoginao amin'izay ianao hampidirana ireo teny Sinoa voarara.
(Saingy, mbola tsy afaka hampiditra teny Anglisy toy ny “ass” (vody) ianao, izay voarara ao amin'ny pejy amin'ny teny Anglisy.)